DAAWO: Axmed Madoobe oo qorshe cusub u dagay Doorashada Jubbaland & DF oo kujahawareersan. – Puntlandtimes
KISMAAYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa jahawareerkii ugu dambeeyey u isticmaalay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, ka dib markii ay guddiga Doorashooyinka ee uu dhawaan magacaabay la yimaadeen qaab cusub oo loo galayo doorashada Madaxtinimada ee Jubbaland.
Doorashada oo dhici doonta Bisha August ee nagu soo wajahan, ayay guddigu sheegeen in Habka xulida Xildhibaanadu ay tahay in ay beel kasta soo gudbiso 3 Musharax oo u tartamaya Kursiga beeshaas ay ku leedahay baarlamaanka Jubbaland.
Guddigu waxay sheegeen in qorshahooda ay ku qanciyeen beesha Caalamka oo ay shalay kulan gaar ah kula yeesheen magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen in u yahay qorshaha ugu dhaw ee looga gudbi karro is qabqabsiga u dhaxeeya beelaha qaarkood.
Dawladda Faderaalka ayaa doonaysa in ay faragalin kuyeelato arrimaha doorashada Jubbaland ka socda, balse dagaalkii ugu adkaa ayay kala kulmayaan dhinaca Madaxtooyada Jubbaland oo uu Axmed Madoobe doonayo markale in uu sii maamulo.